Iflethi okanye indlu ekwicomplex engaselwandle.. Indlu ekwicomple - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex engaselwandle.. Indlu ekwicomple
Iflethi okanye indlu ekwicomplex etofotofo necocekileyo ecaleni kweBell Park kunye nolwandle oludumileyo olujonge kumant Kufuphi neevenkile zokutyela ezininzi nemoto emfutshane eya kwii-penguin ezidumileyo.
Iflethi ekwicomplex ipholile kakhulu ibe inazo zonke izinto ozifumanayo xa ungena ngqo kwizitepsi ezimfutshane. Inikezela ngobumfihlo obupheleleyo. Yenye yeeyunithi ezine kwisakhiwo sesibini ukusuka ngaphambili kwi-Seaview Garden complex. Le ndawo inendawo ethe cwaka.
Sise kolunye lwamalwandle amahle entsapho kwisithuba seekhilomitha eziyi-75 ukusuka kwisixeko esikhulu sasePerth. Inkqubo yezithuthi zikawonke-wonke isemagqabini. Ibhasi yokuhamba idlula kwiflethi okanye kwindlu ekwicomplex qho emva kwemizuzu eyi-10. Le nto idibana nenkqubo yesitimela ukuya kwi-Perth CBD Ikwadlula nakwi-Rockingham City Shopping Centre enkulu.
Siyikhaya lee-penguin zasendle kunye nokukhenketha ngesikhephe ukuze sibone iidolfini ezikhoyo emanzini ajikelezileyo. Siphila kwiparadesi yamanzi.
Retired fit Business Manager of 82 years. Married to Joy for 54 years.
Likes reading and golfing twice weekly
Le flethi yenza iindwendwe zam zihlale ziyimfihlo, kodwa ndifumaneka ukuba zinemibuzo okanye izinto ezizixhalabisayo.